Mapurisa Anodaidza Vakuru veChristian Alliance
Mapurisa epaHarare Central Police Station anonzi ashevedza dzimwe nhengo dzeChristian Alliance dziri kuchengeta vanhu vakatiza misha yavo kana kumanikidzwa kubuda mudzimba dzavo nenyaya dzemhirizhonga munzvimbo dzakasiyana siyana.
Mhirizhonga iyi inonzi iri kukonzerwa nenhengo dzeZanu PF. Danho remapurisa iri rinoitika panguva apo sangano reChristian Alliance rakakumbira kusangana nemukuru wemapurisa, VaAugustine Chihuri, kuti vakurukure navo pamusoro pekushungurudzwa kuri kuitwa vanhu nemapurisa.
Vanhu vakawanda, zvikuru muguta reHarare, vakatiza misha yavo vakanopotera mumachechi akasiyana siyana, asi vamwe vacho vakazotorwa nemapurisa vakavhundutsirwa vachinzi vasiyane nezvekutsigira bato reMDC.
Mumwe wevakuru veChristian Alliance, vanoshanda vari kuBulawayo, Reverend Ray Motsi, vaudza Studio 7 kuti vari kushushikana zvikuru kuti vanhu vari kushungurudzwa iwo mapurisa aripo asi asina zvaari kuita.